Blocked ducts during breastfeeding – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
နို့ခြောငျးချေါ နို့ပွှနျတှဟော….. နို့တှကေို သငျ့ရငျသားရဲ့အောကျခွတေဈသြှူးတှဆေီကနေ နို့သီးခေါငျးထိပျဆီကို ပို့ပေးတဲ့ ပွှနျတှဖွေဈပါတယျ..။ ဒီပွှနျတှထေဲက တခြိူ့ဖွဈဖွဈ ပိတျတဲ့အခါ အဲဒီ နို့လမျးကွောငျးမှာ နို့ကောငျးကောငျးမထှကျတော့ဘဲ… နို့တှကေ နောကျပွနျသှားပါတယျ..။ အဲဒီအခါ ရငျသားကဖောငျးလာပွီး မိခငျကို နာကငျြခွငျးနဲ့ မသကျမသာဖွဈခွငျးကိုခံစားရနိုငျပါတယျ..။ ဒီပိတျဆို့နတေဲ့ နို့တှကေို ကောငျးကောငျးထှကျအောငျမလုပျနိုငျရငျ ရငျသားရောငျယမျးခွငျးနဲ့ ပိုးဝငျခွငျးကိုပါ ဖွဈစနေိုငျတာမို့ မပေါ့ဆသငျ့ပါဘူး..။
သငျ့ကလေးက နို့မကွာမဏ မစို့တဲ့အခါ…. သငျက ခဏခဏတိုကျမပေးတာပဲဖွဈဖွဈ… ကလေးက အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့မစို့တာပဲဖွဈဖွဈ အဲလိုအခါမြိူးမှာ နို့ခြောငျးပိတျတတျပါတယျ.။
သငျ့ကလေးက လုံလုံလောကျလောကျမြားမြားမစို့တဲ့အခါ…. သငျ့ရငျသားတှေ အရမျးတငျးနရေငျဖွဈဖွဈ …. နို့သီးခေါငျးအထဲဝငျနရေငျဖွဈဖွဈ…. ဒါမှမဟုတျ သငျ့ကလေးမှာ လြှာခငျတှဲနတောမြိူးရှိရငျဖွဈဖွဈ ကလေးက သငျ့နို့တှကေို လု့လောကျအောငျမစို့တဲ့အခါ နို့ခြောငျးပိတျတတျပါတယျ…။
သငျအဝတျတှကေိုတငျးတငျးကွပျကွပျဝတျထားမိပွီး ရငျသားကို ဖိထားသလိုဖွဈတဲ့အခါ ပိတျတတျပါတယျ…။
သငျ့နို့သီးခေါငျးထိပျကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးပါ..။ ရခြေိူးပွီးခါစအခြိနျမြိူးမှာ နူးညံ့တဲ့တဘကျ ဒါမှမဟုတျ ဖလနျနယျလို အစမြိူးကိုရနှေေးနှေးမှာ စိမျပွီး ခပျဖွညျးဖွညျးပှတျတိုကျပေးပါ..။
နို့ခြောငျးပိတျတဲ့ဖကျက ရငျသားကိုလညျး သငျ့ကလေးဆကျစို့ပါစေ…ဒါက ပိတျနတေဲ့နို့တှမွေနျမွနျစီးဆငျးသှားနိုငျဖို့ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ..။
မကွာခဏ နို့တိုကျပေးပါ..။ နို့တိုကျခြိနျ တဈခါနဲ့တဈခါကွားမကွာပါစနေဲ့..။ လိုအပျရငျ သငျ့ကလေးအိပျနရေငျတောငျ ကလေးကိုနှိူးပွီးတော့တိုကျပေးပါ..။ ကလေးမစို့သေးတဲ့ ကွားခြိနျမှာလညျး နို့တှကေို သငျ့ဖာသာ လကျနဲ့ညှဈပွီး နို့ရညျတှေ ထှကျသှားအောငျလုပျပေးပါ..။
ကလေးကို နို့တိုကျပုံတိုကျနညျး မှနျကနျပါစေ..။ လိုအပျရငျ ဆရာဝနျ ဆရာမရဲ့ အကူအညီရယူပါ..။
သငျ့ကလေးက အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ နို့သခြောမစို့နိုငျဘူးဆိုရငျ …. သငျ့ဖာသာ လကျနဲ့ နို့ကိုညှဈထုတျပေးပါ..။ နို့ညှဈတဲ့ အကူကိရိယာ ဒါမှမဟုတျ နို့ညှဈစကျကို လညျး သုံးနိုငျပါတယျ..။
ရနှေေးအိတျ ဒါမှမဟုတျ ရနှေေးပုလငျး ဒါမှမဟုတျ ရနှေေးဆှတျထားတဲ့ ဖလနျနယျစနဲ့ သငျ့ရငျသားကို ဖိကပျပေးပါ…။ ရခြေိူးတဲ့အခါ ရနှေေးနှေးနဲ့ ခြိူးပါ…။ ရနှေေးက အရောငျလြော့စနေိုငျပါတယျ..။
လကျဖဝါးပွငျနဲ့ ရငျသားကို နှိပျနယျပေးပါ..။
ကလေးကို ပုံစံပွောငျးပွီးနို့တိုကျပါ..။ ဥပမာ ထိုငျရကျအနအေထားအပွငျ ဘေးတစောငျးလှဲပွီး ကလေးကို သငျ့လကျမောငျးအောကျမှာထားပွီး နို့တိုကျတာမြူိးလုပျနိုငျပါတယျ…။
ပါရာစီတမော ဒါမှမဟုတျ ibuprofen လို အကိုကျအခဲပြောကျဆေးမြိူး လိုအပျရငျသောကျနိုငျပါတယျ..။
အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့နညျးလမျးတှကေို လုပျကွညျ့လို့ ဆယျ့နှဈနာရီကနေ နှဈဆယျ့လေးနာရီအတှငျး သကျသာမလာရငျ… ဒါမှမဟုတျ ရငျသားနီရဲရောငျယမျးတာ …..ဖြားတာ စတာတှရှေိရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ပွသပွီး ကုသမှူခံယူသငျ့ပါတယျ…..။ ဆရာဝနျက လိုအပျရငျ သငျ့ကို ပိုးသတျဆေးပေးပါလိမျ့မယျ…။
နို့ချောင်းခေါ် နို့ပြွန်တွေဟာ….. နို့တွေကို သင့်ရင်သားရဲ့အောက်ခြေတစ်သျှူးတွေဆီကနေ နို့သီးခေါင်းထိပ်ဆီကို ပို့ပေးတဲ့ ပြွန်တွေဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီပြွန်တွေထဲက တချိူ့ဖြစ်ဖြစ် ပိတ်တဲ့အခါ အဲဒီ နို့လမ်းကြောင်းမှာ နို့ကောင်းကောင်းမထွက်တော့ဘဲ… နို့တွေက နောက်ပြန်သွားပါတယ်..။ အဲဒီအခါ ရင်သားကဖောင်းလာပြီး မိခင်ကို နာကျင်ခြင်းနဲ့ မသက်မသာဖြစ်ခြင်းကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်..။ ဒီပိတ်ဆို့နေတဲ့ နို့တွေကို ကောင်းကောင်းထွက်အောင်မလုပ်နိုင်ရင် ရင်သားရောင်ယမ်းခြင်းနဲ့ ပိုးဝင်ခြင်းကိုပါ ဖြစ်စေနိုင်တာမို့ မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး..။
သင့်ကလေးက နို့မကြာမဏ မစို့တဲ့အခါ…. သင်က ခဏခဏတိုက်မပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်… ကလေးက အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မစို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲလိုအခါမျိူးမှာ နို့ချောင်းပိတ်တတ်ပါတယ်.။
သင့်ကလေးက လုံလုံလောက်လောက်များများမစို့တဲ့အခါ…. သင့်ရင်သားတွေ အရမ်းတင်းနေရင်ဖြစ်ဖြစ် …. နို့သီးခေါင်းအထဲဝင်နေရင်ဖြစ်ဖြစ်…. ဒါမှမဟုတ် သင့်ကလေးမှာ လျှာခင်တွဲနေတာမျိူးရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် ကလေးက သင့်နို့တွေကို လု့လောက်အောင်မစို့တဲ့အခါ နို့ချောင်းပိတ်တတ်ပါတယ်…။
သင်အ၀တ်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဝတ်ထားမိပြီး ရင်သားကို ဖိထားသလိုဖြစ်တဲ့အခါ ပိတ်တတ်ပါတယ်…။
သင့်နို့သီးခေါင်းထိပ်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ..။ ရေချိူးပြီးခါစအချိန်မျိူးမှာ နူးညံ့တဲ့တဘက် ဒါမှမဟုတ် ဖလန်နယ်လို အစမျိူးကိုရေနွေးနွေးမှာ စိမ်ပြီး ခပ်ဖြည်းဖြည်းပွတ်တိုက်ပေးပါ..။
နို့ချောင်းပိတ်တဲ့ဖက်က ရင်သားကိုလည်း သင့်ကလေးဆက်စို့ပါစေ…ဒါက ပိတ်နေတဲ့နို့တွေမြန်မြန်စီးဆင်းသွားနိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်..။
မကြာခဏ နို့တိုက်ပေးပါ..။ နို့တိုက်ချိန် တစ်ခါနဲ့တစ်ခါကြားမကြာပါစေနဲ့..။ လိုအပ်ရင် သင့်ကလေးအိပ်နေရင်တောင် ကလေးကိုနှိူးပြီးတော့တိုက်ပေးပါ..။ ကလေးမစို့သေးတဲ့ ကြားချိန်မှာလည်း နို့တွေကို သင့်ဖာသာ လက်နဲ့ညှစ်ပြီး နို့ရည်တွေ ထွက်သွားအောင်လုပ်ပေးပါ..။
ကလေးကို နို့တိုက်ပုံတိုက်နည်း မှန်ကန်ပါစေ..။ လိုအပ်ရင် ဆရာဝန် ဆရာမရဲ့ အကူအညီရယူပါ..။
သင့်ကလေးက အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် နို့သေချာမစို့နိုင်ဘူးဆိုရင် …. သင့်ဖာသာ လက်နဲ့ နို့ကိုညှစ်ထုတ်ပေးပါ..။ နို့ညှစ်တဲ့ အကူကိရိယာ ဒါမှမဟုတ် နို့ညှစ်စက်က်ို လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်..။
ရေနွေးအိတ် ဒါမှမဟုတ် ရေနွေးပုလင်း ဒါမှမဟုတ် ရေနွေးဆွတ်ထားတဲ့ ဖလန်နယ်စနဲ့ သင့်ရင်သားကို ဖိကပ်ပေးပါ…။ ရေချိူးတဲ့အခါ ရေနွေးနွေးနဲ့ ချိူးပါ…။ ရေနွေးက အရောင်လျော့စေနိုင်ပါတယ်..။
လက်ဖ၀ါးပြင်နဲ့ ရင်သားကို နှိပ်နယ်ပေးပါ..။
ကလေးကို ပုံစံပြောင်းပြီးနို့တိုက်ပါ..။ ဥပမာ ထိုင်ရက်အနေအထားအပြင် ဘေးတစောင်းလှဲပြီး ကလေးကို သင့်လက်မောင်းအောက်မှာထားပြီး နို့တိုက်တာမျူိးလုပ်နိုင်ပါတယ်…။
ပါရာစီတမော ဒါမှမဟုတ် ibuprofen လို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးမျိူး လိုအပ်ရင်သောက်နိုင်ပါတယ်..။
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေကို လုပ်ကြည့်လို့ ဆယ့်နှစ်နာရီကနေ နှစ်ဆယ့်လေးနာရီအတွင်း သက်သာမလာရင်… ဒါမှမဟုတ် ရင်သားနီရဲရောင်ယမ်းတာ …..ဖျားတာ စတာတွေရှိရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး ကုသမှူခံယူသင့်ပါတယ်…..။ ဆရာဝန်က လိုအပ်ရင် သင့်ကို ပိုးသတ်ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်…။